ကုသမှုအထောက်အကူပြုဌာနခွဲ – Department of Medical Service
Posted on October 26, 2020 October 26, 2020 by Author 2
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများတွင် COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခြင်းကို ၂၀၂၀-ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁:၀၀)နာရီမှ ညနေ (၄:၀၀)နာရီအထိ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကုသရေး) ဒေါက်တာသီတာလှ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ကုသရေး) ဒေါက်တာမိုးခိုင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာနများ၊ ဗဟိုအဆင့်ဆေးရုံကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အဆင့် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးများမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီးများ၊ ဆေးရုံအုပ်များ၊ IPC focal person များ စုစုပေါင်း (၁၀၀)ဦးခန့်... Read More | Share it now!
Posted on September 23, 2020 by Editor 1
Download pdf; https://drive.google.com/file/d/18GxqUM6Xir_ABAx-zRk65mjOwcpYc9T-/view?usp=sharing ... Read More | Share it now!
Workshop on SOP and Guideline for Medical Social Workers (Mandalay)
Posted on August 4, 2020 August 25, 2020 by Author 2
ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (မူကြမ်း)အပါ် ကြည့်ရှုသုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း (Workshop on Review and Revision of SOP and Guideline for Medical Social Workers) ဒုတိယအကြိမ် (၂)ရက်တာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား သင်တန်းခန်းမ၊ မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ (၂၃-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် စတင်ကျင်းပ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဒေါက်တာစုစုဒွေး၊ ဆေးရုံအုပ်ကြီးမှ အမှာစကား ပြောကြား၍ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဆေးရုံအုပ်ကြီး မှ ပြောကြားရာတွင် ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် လူနာများ၏အရေးကိစ္စအား ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် NGOs, INGOs များနှင့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊... Read More | Share it now!
Workshop on SOP and Guideline for Medical Social Workers (Yangon)
Posted on August 4, 2020 August 4, 2020 by Author 2
ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် မူကြမ်းအပါ် ကြည့်ရှုသုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း (Workshop on Review and Revision of SOP and Guideline for Medical Social Workers) ပထမအကြိမ် (၂)ရက်တာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား အစည်းအဝေးခန်းမ၊ ခုတင်-၅၀၀ အထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်တွင် (၂၀-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် စတင်ကျင်းပ ဆောင်ရွက် ခဲ့ရာ ဆေးရုံအုပ်ကြီး၊ ဒေါက်တာအေးအောင်မှ အမှာစကား ပြောကြား၍ ဖွင့်လှစ် ပေးခဲ့ပါသည်။ ဆေးရုံအုပ်ကြီးမှပြောကြားရာတွင် ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသာ မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတကာတွင်လည်း ဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်း၊ လူနာများ Standard Treatment ရရှိစေရန်... Read More | Share it now!
ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင် (၂) (ဓာတ်မှန်၊ အကြော၊ ဆေးဝါး) ဖြေဆိုမည့်သူများစာရင်း၊ အချိန်နှင့်နေရာများ
Posted on July 3, 2020 July 3, 2020 by Author 2